Dhaxalka Jony Ive ee Apple: Guulihiisii ​​weynaa iyo Guuldarooyinkiisii ​​| Wararka IPhone
Jonathan Ive, oo ah naqshadeeyaha caanka ah ee reer Ingriis ah kana shaqeynayay shirkadda Apple muddo soddon sano ku dhow ayaa ku dhawaaqay inuu ka tagayo shirkadda, shirkaddii u qaabaysay jago fulineed isaga kaliya ayaa ku dhawaaqday inuu ka tagayo shirkadda oo uu keligiis duulayo, isaga oo ururinaya kooxdii naqshadeynta u gaarka ahayd. Tani waa sida guru Steve Jobos uu yahay ilayskii ugu dambeeyay ee joogitaanka shirkadda waa mid cakiran, maaddaama Jony Ive uu ahaa ugu yaraan mid ka mid ah dadka uu jecel yahay, qaybna lagu eedeeyo guushiisa.
Si kastaba ha noqotee, ku dhowaad soddon sano way cadahay inaan sidoo kale soo marnay hooska qaar. Waxaan ku soo booqaneynaa dhamaan shaqadiisa Jony Ive ee Apple waxaanan ku tusineynaa guulaha waaweyn iyo waliba guul darrooyinkiisa xun, maxaa yeelay Ive wuxuu awood u lahaa kan ugu fiican, iyo kan ugu xun.
Jony Ive wuxuu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka tagay Apple
Imaatinka Jony Ive wuxuu soo bilaabmay xitaa ka hor inta uusan Steve Jobs ku soo laaban shirkadda ka dib markii uu helay NeXT. Si kastaba ha noqotee, qof kastaa wuu ogyahay in Steve-kii fiicnaa uu sameeyay ugaarsi sixir ah, wuxuuna kaliya doonayay inuu isku hareereeyo sida ugu fiican, iyo in aan fahmi karno. Qof had iyo jeer ku riyaaqa kalsoonidiisa oo loo arkay inuu yahay geel-jire ka socda Apple horumarkiisa u dhow ee aan la joojin karin sannadihii la soo dhaafay wuxuu ahaa Jony Ive. Waxyaabaha kale, waxaan ku eedeeyey wax soo saarkii ugu horreeyey ee Steve Jobs oo lagu dhawaaqay qaraxii Apple, iMac.
1 The transaccent iMac, bilowgii waagii cusub ee naqshadeynta
2 Power Mac G5 iyo bilowgii "Aluminimalism"
3 Guusha 'MacBook Air', macsalaamaynta qalfoofka iyo guul darrooyinka muuqda
The transaccent iMac, bilowgii waagii cusub ee naqshadeynta
Waxay ahayd sanadkii 1998, Apple waxay ku jirtay dhibaato culus maxaa yeelay suuqa kumbuyuutarrada shaqsiyadeed wuu sii xumaanayay oo xitaa si ka sii daran ayuu ahaa shirkadda shirkadda Cupertino sababo la xiriira astaamaha oo kooban iyo qiimaha sarreeya. Steve Jobs wuu ogaa inay u baahan yihiin wax ka badan oo kaliya kombuyuutar, waxay u baahan yihiin wax ay dadku rabaan inay ku haystaan ​​gurigooda oo aad uga fog waxqabadka, wuxuu u baahan yahay daboolida joornaalada, wuxuuna ku aaminay hawshan adag Jony Ive.
Waxaan haystay fikradda ah abuuritaanka alaabta AiO (All in One), kumbuyuutar shaqsiyeed oo dhan oo leh isku xirnaansho isla markaana aan lahayn wax la qariyo, maxaa ka fiican oo lagu sameeyo marka loo eego translucent? Kumbuyuutarrada ilaa maanta waxay lahaayeen xaglo fiiqan, midabbo aasaasi ah sida caddaan ama madow oo aad iyo aad u daran, tanina waxay ku dhammaatay iMac, oo ah kombiyuutarka sameeya soo-saarayaashu inay billaabaan inay ka walwalaan naqshadda kombuyuutarkooda. Naqshadahan qalooca, balaastigga iyo nus-translucent waxay socon doonaan 1998 ilaa 2001, inaga oo runtii naga tagaya alaab fool xun sida iBook, laptop oo umuuqday toy, ama iPower, kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo tirtiraya halista xafiis kasta oo istaroog ah. Si kastaba ha noqotee, waxaan sidoo kale aragnay mucjisooyin cusub sida Power Mac 4G Cube, kumbuyuutar kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo qaab naqshadaysan oo xitaa maanta u muuqda avant-garde. Waxyaabaha waxay bilaabeen inay isbedelaan imaatinka iPod sanadkii 2001, biraha ayaa bilaabaya inay qaadaan marxaladda dhexe iyo gooladaha sifiican looma aqoon.
Power Mac G5 iyo bilowgii "Aluminimalism"
Powerbook G4 wuxuu ahaa Laptob lagu sameeyay aluminium iyo titanium oo macsalaameeyay caag, wuxuu la yimid gacmo leh xaglo badan oo toosan laakiin qalloocsan xagasha (Steve Jobs mania oo neceb 90º xagal) wuxuuna calaamadeeyay ka hor iyo ka dib xilligii ee naqshad heer-teknoloji ah. Tusaale cad wuxuu ahaa iMac G5, oo ahayd munaarad gebi ahaanba macdan ah oo ka tagtay taabashada caruurnimada oo heshay yaraanta, miyir-qabka iyo ku-xadgudubka tallaabooyinkeeda caddaaladda ah. Illaa iyo hadda xilligii balaastigga ee Apple, runti, dadka isticmaala Apple waxay aad ugu barteen birta iyo quraaradda, in badan ayaa quudhsata alaabada ka samaysan caag, haddii ay jirto sabab qasab ah oo taageerta.
Tan iyo markaas, badeecadaha birta ah waxay noqdeen astaamaha shirkadda Cupertino, Laga soo bilaabo 2003 waxaan aragnay badeecooyin ay ka mid yihiin iPod Nano, iPod Shuffle, noocyo cusub oo iMac ah oo sii kordhaya oo u eg waxa ay yihiin maanta iyo xitaa TV-ga Apple ee ugu horreeyay ee soo noqda 2007 oo aad ugu eg Mac Mini. Waxa had iyo jeer socday waxay ahayd faahfaahinta tufaaxa la qaniinay. Waqtigaan, badeecadaha softiweerka ee Apple waxay diirada saareen dhimirka- Farsamo naqshadaysan oo sheyga laga soo dheegtay ku haayo qurxiyo ama qaab-dhismeedyo lagama maarmaan u ahaa walxaha asalka ah. Asal ahaan, astaamo isku dayaya inay abuuraan xaqiiqda waxa ay matalayaan sida ugu macquulsan. Inta lagu jiro taariikhdaan wax yar oo ka mid ah alaabada Apple ayaa helay cabashooyin heer naqshadeed ah, IPhone-kii asalka ahaa ayaa la soo bandhigay isku dar ah aluminium iyo balaastig Apple-na wuxuu ka sii socday xoog ilaa xoog.
Guusha 'MacBook Air', macsalaamaynta qalfoofka iyo guul darrooyinka muuqda
Xilligii casriga ahaa ayaa yimid Sanadkii 2008 Apple waxay soo bandhigtay MacBook Air, laptop 13-inch ah oo umuuqday riyo rumowday, waxay ahayd mid khafiif ah oo aad ufudud in xitaa shan sano kadib ay wali ahayd hogaamiye aan laga adkaan karin qaybteeda, gebi ahaanba laga sameeyay aluminium xarriiq ah oo macno ahaan uga dhigay qurux. Sannadkii 2010 waxyaabihii ayaa ku soo kordhay imaatinkii iPad-ka, oo asal ahaan u muuqday iPhone weyn, iyo mid ka mid ah jawharadii taajkii Jony Ive, IPhone 4. Badeecadani waxay isku darsatay bir bir ah oo leh muraayad, muran la'aan waa mid ka mid ah taleefannada ugu quruxda badan abid, mar labaad si la yaab leh ayey uga horreeysaa waqtigeeda xagga naqshadeynta.
Si kastaba ha noqotee, inta lagu jiro waqtigan waxaan sidoo kale helnay munaasabad cabsi gelin ah, Apple waxay go'aansatay inay soo saarto iPhone 5C, oo ah gabi ahaanba fashil ku yimid iibka badiyaa midabkeeda cajiibka ah awgood oo maxaad u odhan weyday, waxay ka samaysnayd caag. Naqshadaha waxaa lagu hayey inta udhaxeysa iPhone 6 oo gabi ahaanba kusoo laabtay aluminium isla markaana sii waday in badhanka Guriga ay ka dhigto astaantiisa iyo xitaa iPhone 8, inkasta oo muraayad gadaal ka haysatay ay wali xoogaa suuro gashay. Wax waliba way "dillaaceen" imaatinka iPhone X, taleefan ku soo noqday heerkii Apple ee heer sare, laakiin sidoo kale si weyn ayaa loo dhaleeceeyay sababtoo ah "darajo" xagga sare ah Si kastaba ha noqotee, waxay sidoo kale dejisay isbeddel waxayna sii wadaa inay sidaas sameyso ilaa maanta. Badeecadaha intiisa kale ma aysan soo marin isbedello xag-jir ah, xitaa Apple Watch waa waxa aad ka filan karto badeecadda shirkadda Cupertino, markasta oo ay naga tagayaan iyadoo afkeennu furan yahay. Si kastaba ha noqotee, waxaan helnaa weyn Naqshadeynta naqshadeynta iyo tiknoolajiyada ugu yar, sida AirPods. Sameecadaha dhagaha ee 'Apple' sidoo kale waxay abuureen isbeddel, aad bay u raaxaystaan, indhaha ayay ka farxiyaan waxtarna way leeyihiin. Laakiin wax ayaa sidoo kale dhintay waqtigan mana ahayn caag oo keliya, Apple wuxuu macsalaameynayay qalfoofnimada iyo 'minimalism' wuxuu ku qaadanayay barnaamijka iOS 7.
Iyo illaa iyo hadda, markii Jony Ive uu go'aansaday inuu ka tago shirkadda Cupertino inuu keligiis daalacdo, in kasta oo uu ku sii wadi doono Apple iyada oo loo marayo xiriir ganacsi oo soo jireen ah, bixitaankiisu ma saameyn doonaa naqshadaha Apple? Waa la arki doonaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Dhaxalka Jony Ive ee Apple: Guulihiisii ​​weynaa iyo Guul darrooyinkiisii